သာလွန်ဇောင်းထက်| January 10, 2013 | Hits:8,887
8 | | မက်စ်မြန်မာကုမ္ပဏီက လှူဒါန်းထားသော ရန်ကင်းကလေးဆေးရုံတွင် တွေ့ရသည့် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နှင့် ကုမ္ပဏီပိုင်ရှင်ဦးဇော်ဇော်။ (ဓာတ်ပုံ – မက်စ်မြန်မာ)
Your email address will not be published. Required fields are marked *	Name * Email * Website Comment ohnmar January 10, 2013 - 5:25 pm	သိပ်အမျှော်အမြင်ကြီးသောစကားစုများဖြစ်ပါသည်။အမေစုကိုလေးစားပါသည်။
Reply	swe htwe January 11, 2013 - 1:36 am	That’ right. I agree to you.
Reply	May January 10, 2013 - 5:52 pm	I hope DASSK is not just giving the reason why she has to be so much closely with cronies.
Reply	June January 11, 2013 - 6:05 pm	You are so clever.You know ur self.You have only one chance ( waiting).Nothing else.
Reply	May January 12, 2013 - 9:44 pm	Oh! June. You are right.
Reply	pps၁၂၃၄၅ January 10, 2013 - 8:31 pm	ခရိုနီများ ချမ်းသာလာခြင်းမဟုတ် ပါ။ စစ် အစိုးရ၏ အားနည်းချက် ကို အကျိုးရှိရှိ အကျိုးချ နိုင်သော စီးပွားရေး လုပ်သူများ ချမ်းသာလာခြင်း ဖြစ်ပါသည်။
Reply	Walker January 10, 2013 - 8:53 pm	သည်လို၊ လူထုခေါင်းဆောင်ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့၊ သည်းခံခွင့်လွှတ်ခြင်းအပြည့်နဲ့အတူ၊ တိုင်းပြည်ပြန်လည်ထူထောင်ရေးအတွက်၊ အလွန်မွန်မြတ်ပြီး၊ အမျှော်အမြင်ကြီးမားတဲ့၊ သဘောထားခံယူချက်ကို၊ ဦးစွာ မဖြစ်မနေ ( ၁ ) ခရိုနီကြီး / လတ် / ငယ် / လောင်း များကိုယ်တိုင်ကပင်၊ မကွယ်မ၀ှက်၊ လေးလေးစားစားခံယူတတ်ဘို့လိုအပ်မယ်ထင်မိ ပါတယ်၊ ( ၂ ) သည်နေ့၊ အရေးအရာအားလုံးနီးနီးမှာ၊ အဓိက၊ ချုပ်ကိုင်ဦးဆောင်နေဆဲဖြစ်တဲ့ အာဏာပိုင်ဟောင်း / သစ် / လောင်း များကလည်း ၊ သတ္တိရှိရှိနဲ့ ရိုးရိုးသားသား ခံယူတတ်ဘို့ လိုအပ်မယ်ထင်ပါတယ် ၊ ( ၃ ) တိုင်းပြည်နာလန်ပြန်ထူဘို့အရေးအတွက်၊ အလူးအလဲဒဏ်တွေကိုအသေအကြေ ကြံ့ကြံ့ခံရင်း၊ သည်နေ့ထိတိုင် လူထုရဲ့ရှေ့မှ မားမားမတ်မတ်ရပ်တည်နေကြဆဲဖြစ်သလို၊ လူထုရဲ့အားကိုးယုံကြည်ခြင်းကိုလဲ ရရှိနေကြဆဲဖြစ်တဲ့၊ နိူင်ငံရေးဦးဆောင်သူများ သဘောပေါက်လက်ခံနိူင်ကြဘို့လဲ လိုအပ်မယ်ထင်မိပါတယ် ။ အဆုံးတိုင်း အဆုံးတိုင်းမှာတော့ ၊ သတိတရားနဲ့ စိုးရိမ်ပူပန်မူ့တွေကိုသာ၊ မိုးလင်းမိုးချုပ်၊ နှစ်ပေါင်းများစွာ၊ ဖက်တွယ်လာခဲ့ကြရတဲ့၊ အမှန်တကယ်လဲ၊ တွေ့ကြုံခံစားလာခဲ့ကြရတဲ့ လူထုတွေအတွက်၊ အရာရာကို ချပြတယ်ဆိုတာထက် ပွင့်လင်းမြင်သာမူ့ရှိရှိနဲ့ အကျိုးသက်ရောက်မူ့တွေ အနှေးနဲ့အမြန်ရောက်ရှိလာဘို့ ကြိုးစားကြဘို့ လိုအပ်မယ်ထင်မိပါတယ်။
Reply	a January 10, 2013 - 10:20 pm	အန်တီပြောတာတွေအကုန်မှန်တယ်ဆိုရင်တောင်၊ပြည်သူတွေအနေနဲ့အာဏာရှင်နဲ့အပေါင်းအပါတစ်စုကိုစိစစ်ဖို့အခြေအနေမရှိဘူး၊အခြေခံဥပဒေနဲ့တောင်ကာကွယ်ထားတာ။ပြည်သူအများစုကတော့အပြစ်မရှိတဲ့သူတွေကိုလွတ်လပ်စေချင်ပြီး၊အပြစ်ရှိတဲ့သူတွေကိုစိစစ်အရးယူစေချင်တာပါ။ဘယ်သူကတော့တစ်သက်လုံးမကောင်းတော့ပါဘူးဒါမှမဟုတ်တစ်သက်လုံးကောင်းပါတယ်လို့ပြည်သူအများစုကမပြောမိမတွေးမိကြပါဘူးအမှန်တကယ်ပြုပြင်ချင်တယ်မပြုပြင်ဘူးဆိုတာသူတို့ကိုယ်တိုင်ရဲ့ကိစ္စပါ။အာဏာရှင်နဲ့အပေါင်းအပါတစ်စုကတော့တိုင်းပြည်အပေါ်မှာအလွန်အမင်းကိုမကောင်းခဲ့တာတစ်ကမ္ဘာလုံးအသိပါပဲ။လက်ရှိတိုင်းပြည်အခြေအနေကိုကြည့်ရင်သိနိုင်ပါတယ်၊အပြစ်မဲ့သူတွေကိုအမြန်ဆုံးလွတ်ဖို့ကြိုးစားသလို၊အပြစ်ရှိသူတွေကိုလည်းအမြန်ဆုံးစိစစ်အရေးယူဖို့အားလုံးကြိုးစားရမှာပါ။
Reply	မြန်မာ တိုင်းရင်းသူ January 11, 2013 - 3:17 am	အများပြည်သူအတွက်၊ တိုင်းပြည်မှာ လိုအပ်သည်များအတွက် တပြားမကူ၊ မလှုပဲ၊ ကိုယ်ပိုင်ဆိုင်တာကို ကျစ်ကျစ်ပါအောင် သိမ်း၊ ကိုယ်နဲ့ ကိုယ့်မိသားစုပဲ နိုင်ငံရပ်ခြားမှာ ဖြစ်ဖြစ်၊ သီးသန့်နေရာ နေပြည်တော်မှာ စည်းစိမ်ခံစား၊ ပျော်မူးနေသူများထက်စာလျှင် ပြန်ပေးတာ လှုတာ တော်သေးတာပေါ့။
Reply	Lailun January 11, 2013 - 7:27 am	Well! Our so-called Lady is no longer opposition leader but puppet of Thein Sein, no need to mention puppet of Than Shwe. Whether she is trying to become the next president or not, her belief is out of bound. I believe there are many people who agree with her but there are so many people who do not agree with her belief too. The real future leader needs to stand with the people’s wish and the stand they stand for democratic change which we do not see in the Thein Sein administration at all. Cronies from the former rule are not the issues but the ones who gave illegal opportunities to these cronies are the criminals illegally. If our Lady cannot lead Rule of Law Committee effectively, I would like her to quit doing the job. Because she is not serving the Union and her fellow citizens. She no longer stands for the oppressed anyway.
Reply	hotladylay January 11, 2013 - 8:16 am	ခရိုနီတွေရဲ့ Sponsor တွေက အန်တီလုပ်ချင်တဲ့ပညာရေးရန်ပုံငွေရှာဖွေရေးပွဲတွေမှာ အဓိကကျနေတော့လဲ သူတို့ကိုအသက်ရှုနိုင် ဆက်လက်ရှင်သန်နိုင်အောင် ပြန်စောင့်ရှောက်ပေးရမဲ့တာဝန်အန်တီမှာပိုလာရပြန်တာပေါ့နော်။
Reply	zar zar January 11, 2013 - 5:52 pm	Do something what you can.Don’t write what you know.You can say ,the law is like your own nose hole,can put any of your fingers easily.dar bar bal shin..
Reply	Aung Myint Han January 11, 2013 - 8:37 am	အနာဂတ်မှာ တိုင်းပြည်စီးပွားရေးအတွက် ခရိုနီတွေကို သုံးရမှာပါ
Reply	မြန်မာ တိုင်းရင်းသူ January 12, 2013 - 3:18 am	တခုတော့ မြင်တတ်ဘို့လိုတယ်။ အခု အန်တီစုပြောတဲ့၊ ပြောင်းလဲလာချင်တဲ့ ခရိုနီဆိုတာ မက်စ်ဇော်ဇော်တို့ တေဇတို့၊ ရွှေသံလွင်အုပ်စုတို့ပါ။ လက်ပတောင်းက ဦးပိုင်ဆိုတာကြီးထဲ ပါတဲ့ စီးပွားရေးသမားတွေ မဟုတ်ဘူး။
Reply	ဗမာ January 11, 2013 - 12:29 pm	စစ်အစိုးရလက်ထက် ချမ်းသာကြွယ်ဝလာသော ခရိုနီသူဌေးကြီးများကို ပြုပြင်ရန် ပြန်လည် အခွင့်အရေး ပေးရမည်ဖြစ်ကြောင်း အမျိုးသားဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချုပ် (NLD) ဥက္ကဋ္ဌ၊ ပြည်သူ့လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က ပြောဆိုလိုက်သည်။
Reply	han han January 11, 2013 - 5:29 pm	Yes,, that good for to furture. But , U pai ( Army ) and ALL BUSINESS PEOPLE SHOULD TO BE PAID FOR INCOME TAX OVER 30 %
Reply	ုkyawkyawlwin January 11, 2013 - 8:36 pm	အန်တီစုခင်ဗျား
Reply	လူလေး January 11, 2013 - 10:36 pm	လယ်သမားတွေ လယ်သိမ်းခံနေရတာတော့ မပြောဘူး ခရိုနီတော့ အခွင့်အရေးပေးရမယ်တဲ့
Reply	ကောင်းစေချင် January 12, 2013 - 12:53 pm	ခရိုနီ၊ခရိုနီနဲ့မကောင်းပြောနေကြတယ်။ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် ဒီလိုလူတွေကြီးပွားအောင်ကြိုးစားနိုင်ခဲ့ကြတာကိုတော့ အထင်ကြီးလေးစားဖို့ကောင်းပါတယ်။ကိုယ်လဲအဲလိုမလုပ်နိုင်ဘူးလေ။ တချို့တော်တော်များများကမုဒိတာမပွားနိုင်ကြဖြစ်နေကြတယ်။ကျနော်အဲဒီလူတွေနဲ့တစ်ယောက်မှမသိပါ။ ဒါပေမယ့် သူကြီးပွားသလို သူ့ကြောင့်အလုပ်အကိုင်အခွင့်အရေးတွေရရှိ၊ စောင့်မကြည့်ရှုထားတာတွေ လှူဒါန်းထားတာတွေ မနည်းပါ။ မကောင်းပြောနေကြတဲ့သူတွေ သူတို့လောက် ကောင်းကျိုးပြုကြဖူးပါသလား။ သူတို့ကိုအရေးယူ၊ဆင်းရဲအောင်လုပ်ချင်ကြတာလား၊ သစ်တစ်ပင်ကောင်းဆိုတာကြားဖူးပါသလား။ သူတို့ချမ်းသာလို့လူများစု ဘာအကျိုးမဲ့သွားလဲ။ သူတို့စီးပွားချုပ်ကိုင်လို့ ကျန်သူတွေအခွင့်အရေးနစ်နာတယ်ပြောမှာလား။ဒါက သူတို့လိုပြိုင်ဘက် စီးပွားရေးသမားကြီးတွေကိစ္စဖြစ်မှာပါ။ သူတို့လိုအခွင့်အရေးမရခဲ့တဲ့ ၊ရအောင်မယူနိုင်ခဲ့တဲ့သူတွေ အရေးပဲဖြစ်မှာပါ။ သူတို့တည်ထောင်ထားတဲ့ လုပ်ငန်းပေါင်းများစွာမှာ အလုပ်အကိုင်အခွင့်အရေးတွေများစွာ ရရှိခံစားလုပ်ပိုင်နေကြရတဲ့သူတွေနဲ့တော့ဆိုင်မည်မထင်ပါ။ အကောင်းမြင်တဲ့စိတ်နဲ့လည်းကြည့်ကြစေချင်ပါသည်။
Reply	လူလေး January 12, 2013 - 8:05 pm	အကောင်းသိပ်မမြင်နဲ့ကို့လူ ခင်းဗျားလယ်မသိမ်းခံရတော့ ပြောအားရှိတာပေါ့